Ukusebenzisa izixhobo ezibonakalayo ukuchaza ukuphindaphinda nokuhlukana
Kwiimathematika , uluhlu lubhekisela kwisethi yamanani okanye izinto eziza kulandela iphethini ethile. Uluhlu lulungelelaniso-ngokuqhelekileyo kwimigca, iikholomu okanye i-matrix-esetyenziswa ngokuqhelekileyo njengethuluzi lokuboniswa ukubonisa ukuphindaphinda nokuhlukana .
Kukho imizekelo emininzi yemihla yamarrays enceda ekuqondeni ukusetyenziswa kwezi zixhobo ukuhlalutya kwedatha ngokukhawuleza nokuphindaphinda okulula okanye ukwahlukana kwamaqela amakhulu ezinto.
Cinga ibhokisi ye-chocolates okanye i-kreate ye-oranges enelungiselelo eli-12 ukuya kwi-8 ngaphantsi-kunokuba libale nganye, umntu angandisa 12 x 8 ukuchonga ibhokisi nganye iqulethe ii-chocolates okanye ii-oron.
Imizekelo enjengale ncedisa ekuqondeni kwabafundi abancinci malunga nokuphindaphinda kunye nokwahlukana ukusebenza kwinqanaba elisebenzayo, oko kutheni izixhobo zinobuchule xa zifundisa abafundi abancinci ukuba bandise kwaye bahlule izabelo zezinto zangempela njengeziqhamo okanye iisandi. Izixhobo ezibonakalayo zivumela abafundi ukuba baqonde indlela ukujonga iipatheni "zokuncedisa ngokukhawuleza" kunokubanceda babale ubuninzi bezinto ezi zinto okanye bahlule ubuninzi bezinto ezilinganayo phakathi koontanga.
Ukuchaza Iimpawu zokuPhinda
Xa usebenzisa ii-arrays ukuchazela ukuphindaphinda, ootitshala bahlala bebhekisela kwimigqaliselo yimiba yanda. Ngokomzekelo, uluhlu lweeaples ezingama-36 ezilungiselelwe kwiikholam ezintandathu zemitha yeetaples ziza kuchazwa njenge-6 nge-6.
Ezi zixhobo zibanceda abafundi, ngokuyinxalenye yesithathu ukuya kumabanga amahlanu, baqonde inkqubo yokubala ngokuphula iziganeko zibe yizinto ezibonakalayo kwaye bachaza ukuba ukuphindaphinda kuxhomekeke kwiipateni ezinjalo ukukunceda ngokukhawuleza ukufaka iifizi ezininzi ngokuphindaphindiweyo.
Ngokomzekelo, ezintandathu ngeesithandathu, ngabafundi banako ukuqonda ukuba ukuba nganye ikholomu ibonisa iqela leetaples ezintandathu kwaye kukho imida emithandathu yale maqela, baya kuba nama-apula angama-36 ewonke, angathatyathwa ngokukhawuleza ngabanye Ukubala iipulo okanye ngokufaka u-6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 kodwa ngokuphindaphinda inani lezinto kwiqela ngalinye ngenani lamaqela amelwe kwiqela.
Ukuchaza iArada kwiCandelo
Ngokwahlulo, izixhobo zingasetyenziselwa njengesixhobo esinesixhobo sokubonisa ngokucacileyo ukuba amaqela amakhulu ezinto angahlulwa ngokulinganayo kumaqela amancinci. Ukusebenzisa umzekelo ongentla apha wama-apula angama-36, ootitshala banokucela abafundi ukuba bahlule ixabiso elikhulu kumacandelo alinganayo ukuze benze uluhlu njengesikhokelo sokuhlukana kwama-apula.
Ukuba ucele ukwahlula iiapulo ngokulinganayo phakathi kwabafundi abali-12, umzekelo, iklasi iya kuvelisa i-12 nge-3, ebonisa ukuba umfundi ngamnye uya kufumana ama-apula amathathu ukuba ama-36 ahlulwe ngokulinganayo phakathi kwabangu-12. Ngakolunye uhlangothi, xa abafundi bebuzwa ukuba bahlule iipula phakathi kwabantu abathathu, babeza kuvelisa i-3 nge-12 ekhethiweyo, ebonisa iMpahla yokuThuthukisa yokuThengisa ukuba umyalelo wezinto zokuphindaphinda awuchaphazeli umkhiqizo wokuphindaphinda le miba.
Ukuqonda le ngcamango engundoqo yomdlalo phakathi kokuphindaphinda kunye nokwahlukana kuya kunceda abafundi babe nolwazi olubalulekileyo lweemathematika ngokubanzi, okuvumela ukuba iikhompyutheni ezikhawulezayo kwaye zilukhuni njengoko ziqhubeka zibe yi-algebra kwaye kamva zisebenzisa i-mathematics kwi-geometry kunye namanani.
Iimpawu eziManyeneyo kunye nezoQinisekisa
Yintoni abantu abahlala kwi-Statistics?
Yiyiphi iYunithi eYimilinganiselo yoMlinganiselo?
Ukuqonda ukulingana okulinganayo kwi-Algebra
Ukusebenzisa iTragram enkulu ukufundisa iMathe
Iimpawu ezivela kwiWebhu ye-EB White's Charlotte
Elvis Presley Umlinganiselo: 1959
Amaxesha okuhlolwa kwe-MCAT kunye namaZiko okuBhalisa
Ixesha Lokumisa I-Marijuana? - 500+ AbaSomali baxhasa ukuGunyazwa kweMarijuana
Uluhlu lweeNgqungquthela zikaShakespeare
Iimpawu ezichanekileyo Iimpawu eziqhelekileyo zisebenziseka ngesiSpanish
Ikhompyutha ye-Atanasoff-Berry: Ikhompyutha yokuqala ye-computer
Yintoni iGrafu yeBhara
I-Glossary yoBugcisa: Umama wombala
IYunivesithi yase-Wayne State
Ukuqonda iSahlulo se-Primera eSpain
Izibalo: Amagatya eNkululeko
I-Fantasy and Folklore ye-Halloween
Imbali yeNhlonipho yokuBulala e-Asia
Indlela yokubuyisela i-Crossovers kwi-Skates Ice
Imbali yeeOlimpiki zika-1976 eMontreal
Ukulungisa imifuno yeGalofu kunye nesizathu sokuba kwenziwe
I-Samhain Customs and Folklore
I-Step-Step-Step to Improving the Ollies kwi-Skateboard yakho
Izitayela ze Bowling
Isithembiso seSussex (1916)